को हुन् प्रहरी इन्काउन्टरमा परेका अशोक लामा ? | Khabar Express Tv
को हुन् प्रहरी इन्काउन्टरमा परेका अशोक लामा ?
खबर एक्सप्रेस 2018-06-11 मा प्रकाशित Total Shares: 282
काठमाडौं- काभ्रे स्थायी घर भएका अशोक लामा काभ्रेली डन दावा लामाको संगतबाट गुण्डागर्दीमा लागेका हुन् । पहिले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा बस्ने गरेका अशोकले दावाकै सहयोगीका रूपमा ललितपुरलाई आधार बनाएर गुण्डागर्दी शुरु गरेका हुन् ।
शुरुवातमा उनी काठमाडौंका ठमेल, दरबारमार्ग र ललितपुरको लगनखेल क्षेत्रमा सञ्चालित डान्सबारबाट हप्ता असुली गर्ने गर्दथे । पछि उनले विभिन्न व्यापारीलाई चर्को ब्याजमा पैसा दिने ९मिटर ब्याज०को धन्दा शुरु गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । उनी निर्माण क्षेत्रका साना–ठूला ठेक्कापट्टामा समेत संलग्न थिए ।
यसअघि उनीमाथि ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो । उनीमाथि विभिन्न समयमा सार्वजनिक मुद्दा समेत चलेका थिए । पछिल्लो समय उनी विभिन्न व्यवसायीलाई हतियार देखाएर हप्ता असुली गर्ने गर्दथे । विभिन्न व्यवसायीहरूले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई खोजी सूचीमा राखेको थियो ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले लामाको खोजीका लागि विशेष टोली नै परिचालन गरेको थियो । सोमवार दिउँसो युएन पार्कमा भेटिएका लामालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको थियो । उनले प्रहरीमाथि नै गोली प्रहार गर्न खोजेपछि जवाफी फायरिङ गरिएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले बताए ।
लामाको साथबाट एक थान पेस्तोल र त्यसमा लाग्ने २ राउण्ड गोली बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । लामाको दाहिने खुट्टाको पिंडौलामा गोली लागेको छ । उनको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ ।
स्वच्छ छविका तमोट लाई बदनाम गर्न चलखेल
काठमाडौं : जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालका महाप्रबन्धक सानुकाजी तमोट लाई उनको उमेरको विषय लाई लिएर केही बीमा कम्पनीका व्यक्तिहरु बदनाम गर्न लागिपरेका छन् ।एक निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले पत्रकारलाई तमोट ७० वर्ष नाघेको विषयमा समाचार लेख्न अनुरोध गर्ने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ७० वर्ष नाघे पछि प्रमुख कार्यकारी बन्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ । तर महाप्रबन्धकको हकमा भर्ने त्यस्तो कानुनी व्यस्था नभएको बीमा समितिले जनाएको छ ।तमोट चार दशक भन्दा बढि बीमा क्षेत्रमा कुशलतापूर्वक काम गरेका एक अनुभवी व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । उनले हालसम्म विभिन ...
मन्त्री योगेश भट्टराईलाई आक्रमण प्रयास गर्ने पारसका मान्छे भएको खुलासा
काठमाडौं - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई कैलालीको टिकापुर बाट कार्यक्रम सकेर बुद्ध एयरको जहाजमा नेपालगंजको अन्तिम उडानबाट काठमान्डौ फर्कनेक्रमा केहि यात्रुहरुले आक्रमण शैलीमा मन्त्री विरुद्ध कडारूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।त्यस लगत्तै मन्त्री भट्टराईले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै पारसका मान्छे भएको खुलासा गरेका छन् ।एकजनाले पारसका बिरुद्ध सातलाख हस्ताक्षर दरबारमा बुझाएर तैले हामीलाई कति दु:ख दिएको छस् त्यो हामीले कहाँ बिर्सेंका छौ र सम्म भने त्यो सुने पछि उनीहरुको नियत मैले बुझिहाले उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।यस्तो छ - मन्त्री भट्टराईले लेखेको फेसबुक स्टाटस-आ ...